[22 / 01 / 2020] Ịrịba ama Protocol metụtara Travel ji ụgbọ okporo ígwè na-abata Erasmus ụmụ akwụkwọ na Turkey	06 Ankara
[22 / 01 / 2020] Nweta Hike na-agafe agafe na ntinye tiketi tiketi nkeTT!	06 Ankara
[22 / 01 / 2020] Ferins Ferins na-arụ ọrụ na Bosphorus na-alaghachi	34 Istanbul
[22 / 01 / 2020] İZDENİZ Ferry na agba na ebuwanye	35 Izmir
:Bọchị: Nọvemba 8, 2019
Obodo isi obodo Istanbul, Kadikoy Gen. Şahap Gürler Street malitere ọrụ okporo ụzọ ahụ n'ihi ụzọ ọzọ maka ụgbọ ala ndị IETT mepụtara. A na-atụkwasị ebe ndị ọhụrụ na Ayrılıkçeşmesi iji gbochie ndị Istanbul ịkpa ọjọọ. [More ...]
365 Ndi njem njem otu ubochi site na Marmaray, 15 ሺህ ugbo abu ubochi site na ama ndi Martyrs Minister Turhan, Fatih Sultan Mehmet Mahadum Mahadum Vakıf nke Mahadum Haliç Campus Conference Hall nke “Obodo na Obodo [More ...]
Kabataş Bağcılar Tram Times: Agba nke mbụ nke ahịrị 19,3 Km ka e wuru n'etiti Sirkeci na Aksaray ma meghee na 1992. Ahịrị nke jikọtara na ụzọ Topkapı na Zeytinburnu, Eminönü [More ...]
Halkalı Oge Gebze Marmaray na Mwepụta: Marmaray, ọrụ na ijikọ Akụkụ Europe na Anatolian nke Istanbul Halkalı Nwere ike ịchọta ozi niile gbasara nkwụsị na [More ...]
Maapụ Metrobus: can nwere ike ịhụ nkwụsị niile nke Metrobus na otu maapụ, chọpụta nke ọdụ ụgbọ metrobus kacha nso maka ebe ị na-aga na ebe dị anya na nkwụsị metrobus, ebe nkwụsị. [More ...]
Ankaray Metro Okporo ígwè System Map na Ankaray: ọha iga ọrụ Ankara, isi obodo nke Turkey, nke Ankara Metropolitan Municipality General Directorate nke Ego okporo ígwè iga netwọk. Njikwa ụgbọ okporo ígwè Ankara dị [More ...]
Hypersensitive banyere Train High Speed ​​Train; Location ... Grand National Assembly nke Turkey gaa Commission nzute. Onye isi njikwa TCDD Kamuran Yazıcı nọ na nnukwu ọnụ ụlọ ya na osote ndị isi ya maka nzukọ ebe a ga-ahụ ihe ndekọ TCDD. Lee toplantı [More ...]
Mgbapụ Ule Ahịrị Ọkwọ ụgbọ ala nke China na-amalite; Ulo elu nke China nke 350 nke nwere otutu agha nke elu-igwe nwere ihe omuma nke anu aru, dika okpomoku, oku na agba windo [More ...]
Kampun Samsun nke obodo SAMULAŞ kwadoro ndị otu Samsun nke perationlọọrụ ụgbọ na-ahụ maka Njikọ Ndị Ọrụ Ọgbọ Relief (TÜRSİD). Ekesara ozi na ahụmihe na nnọkọ ahụ ndị nnọchi anya nke ndị obodo na-ahụ maka usoro ụgbọ oloko bịara. mastiff [More ...]
• 13.500 n'ogologo n'ogologo zuru oke, nke nwere 27000 m, nke ọ bụla nwere ahịrị abụọ. • A na-eji ntụpọ agbatị agbatị na ọwara mmiri na ogologo nke eriri 1 n'ọdọ mmiri [More ...]
TCDD ekwuputala nsonaazụ nyocha nke ọnụ ya maka iweghachite ndị ọrụ ruo ọnwa atọ zuru ezu. N’ozi ọma banyere emezighi ekwuputa nsonaazụ nyocha nke TCDD; Nyocha metụtara usoro ịnwetara site na TCDD [More ...]
Ahịa tiketi tiketi nke 2019 dị ugbu a Yọọ Mbetị na Times: insgbọ oloko dị elu nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. [More ...]
Ferins Ferins na-arụ ọrụ na Bosphorus na-alaghachi
Nkịta nke gbabara n'ime bọs na oge oyi na-ekpo ọkụ nyere ndị njem nọ n'ime ya aka
Onye nnochite anya Japan bịara na Sivas Chamber of Commerce and Industry
İZDENİZ Ferry na agba na ebuwanye